Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Dial type Blood pressure Apparatus ဒိုင်ခွက်ပါ သွေးတိုင်းကရိယာ
ကျနော့အိမ်မှာ ဒိုင်ခွက်နဲ့ သွေးတိုင်းတာဝယ်ထားပါတယ်။ မမှန်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဝယ်ကတည်းက မမှန်တာပါ။ ၇ဝ/၁၁ဝ ကို အမှန်ယူ သုံးနေရပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်သင့်ပါသလဲဆရာ။
ဆေးရုံ-ဆေးခန်းတိုင်းမှာ မြင်နေကြတဲ့ Blood pressure သွေးဖိအားတိုင်း ကရိယာကို Sphygmomanometer (ဆဖစ်ဂမို-မင်နိုမီတာ) ခေါ်တယ်။ အရင်ဆုံးပေါ်ပြီး ခုထိလဲသုံးနေကြတာမို့ သမားရိုးကျလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ၁၈၈၁ ကတည်းက ဂျာမန်ပညာရှင် (ဆယ်မြူရယ်-ဆီးဖရက်) ကနေ စတင်တီထွင်ပြီး၊ ၁၉ဝ၁ မှာ (ဟာဗေး-ကူရှင်း) က ပိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကရိယာမှာ (မာကျူရီ) ပါပြီး ဂဏန်းဖတ်ရင် မီလီမီတာနဲ့ဖြစ်တာမို့ သွေးဖိအားကို mmHg (မီလီမီတာ-မာကျူရီ) လို့ ရေးရတယ်။ နောက်ပေါ်ကရိယာတွေဖြစ်တဲ့ ဒိုင်ခွက်ပါကရိယာနဲ့ (ဒစ်ဂျစ်တယ်) အမျိုးအစားတွေနဲ့တိုင်းရင်လဲ ဒီအတိုင်းဘဲ ရေးတယ်။
ဒိုင်ခွက်နဲ့ ကရိယာမျိုးက (မာကျူရီ) သုံးသွေးဖိအားတိုင်းကရိယာထက် စိတ်ချနိုင်ပေမဲ့ တိကျမှုကတော့ အဲလောက် မကောင်းလှဘူး။ ဒိုင်ခွက်သုံးကရိယာကို နံရံဖြစ်ဖြစ် တိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ဆင်ထားရင် စစ်ဆေးဘို့လိုတာ နည်းတယ်။ Mercury (မာကျူရီ) ခေါ်တဲ့ပြဒါးဟာ ကိုယ်ထဲဝင်မိရင် အဆိပ်လိုဘဲ။ ဒါကြောင့် ဒိုင်ခွက်ကို ပိုသဘောကျတယ်။ သယ်သွားရတာ ပိုလွယ်တယ်။ ဈေးချိုတာလဲ ပါတယ်ပေါ့။
၃။ လက်ပတ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းက ကိုယ့်လက်နဲ့အံကိုက်ပါစေ။ လက်မောင်းရဲ့ ၈ဝ% ကိုဖုံးနေစေရမယ်။
1. Small adult cuff arm sizes = 7.0 to 9.0 inches
2. Standard adult cuff arm sizes = 9.0 to 13 inches
3. Large adult cuff arm sizes = 13.0 to 17.0 inches
4. Additional cuff arm sizes = 9.0 to 17.0 inches
၄။ ထိုင်နေချိန်တိုင်းရင် ခြေထောက်ကို တင်စရာပေါ်မှာ နားနေသလိုရှိပါစေ။ ဆေးခန်းရောက်ရောက်ချင်း မတိုင်းသေးဘဲ ၅ မိနစ် စသဖြင့်စောင့်ပြီးမှ တိုင်းပါ။ အတိုင်းခံနေသူ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ အနားရပါစေ။ စိတ်ကို တနေရာဆီ ပြောင်းအောင်ကြိုးစားပါ။ "နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ မိုးလေဝသအခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ။"